I-Flameshot: Isithwebula sesikrini esinamandla se-linux | Kusuka kuLinux
Ngijabule ukukwazisa ukuthi yini i- ukuthwebula isikrini engikufakile ekufakweni kwami ​​okuhlukahlukene kweLinux, ithuluzi elinamandla, elilula nelisebenziseka kalula eliqanjwe igama I-Flameshot.
Futhi akukhona ukungabi bikho kwezinye izindlela lokho I-Flameshot Ngiyithandile, ngoba nalapha kubhulogi sikhulume ngamathuluzi ahlukahlukene asivumela ukuthi siwenze Screenshot / izithombe-skriniUkulula kwayo okuhambisana nenani elikhulu lezinto zokusebenza ukucebisa okuthathiwe okungenze ngathandana.
1 Yini iFlameshot?
2 Kungani ngithanda i-Flameshot?
I-Flameshot iyithuluzi lokuthwebula isikrini sohlelo lwethu lokusebenza, oluwumthombo ovulekile, olwenziwe ku-c ++ futhi olunokusekelwa okuphezulu kwama-Linux distros ahlukahlukene. Kugqamile ngokukhanya kwayo nangamathuluzi ayo anamandla asivumela ukuthi senze ukuhlelwa kobungcweti kulokho esikuthathile.
Singabona ukubuka kuqala okuhle kakhulu kwethuluzi esithombeni esilandelayo:
Kungani ngithanda i-Flameshot?
Ngifuna ukuphendula lo mbuzo ngobuqotho, kunamathuluzi amaningi wokuthwebula isikrini engizamile kulo lonke ulwazi lwami kwiLinux, iningi linginikeze izinkinga lapho ngihlela futhi abanye bebenezinkinga zokuhlanganiswa ne distro.
Ithuluzi lokuthwebula isikrini ebengilisebenzisa ngaphambi kweFlameshot kwakunguKazam, okungangabazeki ukuthi lizinzile impela futhi linezici zokubamba ividiyo ezithakazelisa kakhulu. Ihlala ifakiwe kwikhompyutha yami, kepha ayisabambi ukufinyelela okuqondile kwezithombe-skrini, noma kunjalo, ngicabanga ukuthi abasebenzisi abaningi kufanele futhi bazame uKazam futhi banamathele kulowo abamujabulela kakhulu, babone ukuthi uKazam ubengenaso isikhathi esithile. ukuvuselelwa.
IFlameshot iyithuluzi elisha, elinezimpawu ezibalulekile futhi ikakhulukazi elinokubuyekezwa okungaguquguquki, leli lokugcina lingenze ngalikhetha ngokwakhona futhi kancane kancane ngaba ngumhloli wethuluzi.
I-Flameshot Isinikeza isikhombimsebenzisi esisebenzisekayo, esisebenziseka kalula, nokuhlelwa okuhlanganisiwe, futhi ihlangana kahle ne-Imgur yokugcina okuqoqiwe efwini.
Singabuka imibhalo esemthethweni yokufakwa kwaleli thuluzi kusuka ku- lapha
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Flameshot: Isihluthulelo sesikrini esinamandla se-linux
Intulo enkulu! kuyintokozo ukukubingelela mfowethu! Imibhalo yenu mihle kakhulu! Ngiyacela, ungiqondise ekufakweni kwaleli thuluzi.
Lapho kulinganiselwa khona i-distro, njengaku-athikili engxenyeni yokugcina kunesixhumanisi sokufakwa okuningiliziwe okukhonjiswe ngunjiniyela
Ungangitshela ukuthi ngiyifaka kanjani kuLubuntu 16 LTS?
I-Lizard ... ngiyabonga futhi ngokwabelana ... usebenzise i-shutter ... ithuluzi elihle kakhulu.
IShutter futhi iyithuluzi eliphakeme kakhulu, ngicabanga ukuthi uma usujwayele ithuluzi lesithombe-skrini okungafanele lithathelwe indawo
Kufanele uzame izinto ezintsha Don Lagarto! ngiyabona futhi.
Ngizozama, kepha ngangihlala ngisebenzisa i-gnome-skrini futhi angikaze ngibe nenkinga, okungenani kuphela izithombe-skrini, hhayi ukuhlela. Sizobona ukuthi kwenzekani nge-flameshot.
Ithuluzi elihle kakhulu .. kungakuhle uma bengeze i-pixelation kuzinketho zokuhlela
Ku-Windows ngithandana no-ShareX no-Lightshot, kepha ku-Linux alikho ithuluzi lesikrini esingiqinisekisile okwamanje, ngizozama lona.
URichard Tr0n kusho
Ngiwumsebenzisi weShutter futhi ngiyaneliseka, kepha iqiniso lokuthi lolu hlelo luxubene ne-Imgur ludonsela ukunaka kwami, kungaba wusizo kakhulu kwizithangami. Ngokushesha nje lapho ngikwazi khona, ngiyazama, ngiyethemba nje ukuthi izokhanya kakhulu.
Phendula uRichard Tr0n
I-Flameshot iyasilela kimi futhi iShutter ibukeka inamandla amakhulu, kepha kwenzeke ukuthi ngifake ukuncika kwama-60 ku-KDE. Enye indlela efanayo? (kwe-KDE). Ngifuna umagazini ophelele ngokwengeziwe kunalowo onikezwa yiFlameshot (umbhalo, ubukhulu, njll). Ngibonga kakhulu…
Ngabe kukhona okuzama ku-debian nge-xfce?
I-Terminus: Isikhumulo se-multiplatform samanje